Ihe ngwugwu SEO Semalt E-Commerce SEO - Ngwá ọrụ zuru oke iji mepụta okporo ụzọ
Dịka usoro ikpo okwu SEO na Ahịa, Semalt nwere ọtụtụ ọrụ, nke ha niile nwere ike ịba uru maka azụmahịa gị e-commerce. One bụ otu n'ime puku ụlọ ọrụ ere ahịa e-commerce dị ebe ahụ? Na-achọ onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke na-ekwe nkwa oke okporo ụzọ organic na ebe nrụọrụ weebụ gị? Ka osi na, achoghi gi achoro. N'ebe a na Semalt, anyị na-ezukọ mkpa SEO gị niile. Findchọpụta ihe gbasara ọrụ anyị, ị nwere ike pịa ebe a.
Dịka onye azụmaahịa na onye ọchụnta ego, anyị ghọtara ihe mgbu gị mgbe ị tinyere itinye mgbalị gị, mana ọ nweghị onye nwere ike iji ya kpọrọ ihe. Anyị na-enyere gị aka itinye ụlọ ọrụ gị na azụmaahịa gị na saịtị ọchụchọ ndị dị elu, anyị ga-edebe gị ebe ahụ.
Ọrụ anyị agaghị ewepụta naanị ntakịrị iberi ma ọ bụ Pizza kacha mma; anyị na - ewetara gị Mpekere mgbe niile - n'ụzọ a, ị kachasịghị mma otu ụbọchị, izu ma ọ bụ otu ọnwa. Ọ bụrụhaala na gị na anyị bụ ndị otu, ndị otu anyị ga na-elele weebụsaịtị gị oge niile wee bulie ogo ya. Anyị ga-ewetara gị okporo ụzọ na-agafe agafe nke na-enyere aka ire ụlọ ọrụ gị.
Iji mee ka azụmaahịa e-azụmahịa na-aga nke ọma taa, ịchọrọ ọtụtụ okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ma nke ahụ ezughi; ịchọrọ ọpịpị ndị ahụ ka ị nọrọ, ịnyagharịa saịtị gị ma chọta ọrụ ma ọ bụ ngwongwo ha chọrọ.
Yabụ kedu ihe ebe nrụọrụ weebụ gị ga - eme ka iwepu ụdị ihe a ma wetara gị uru nzuzu, azịza ya dị mfe - ngwugwu SEO e-commerce SEO.
Ihe nzuzo anyi nwere ikike imeputa uzo di egwu. Ekwere m na ị nụla banyere SEO, mana ọ bụrụ na ị naghị echegbu onwe gị; anyị nwere isiokwu zuru oke maka gị. Ọ bụ ngwa na ọsọ dị mfe ga-eme ka ị gbagoo ọsọ ọsọ na oge adịghị. Pịa ebe a iji mụta isi nke SEO.
Ọ bụrụ na ị maara SEO, ị maara na okporo ụzọ organic adịghị ka akụ ahịa ndị ọzọ maka ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụghị naanị na ị ga - enweta pịa "iguzosi ike n'ihe", mana ọ bụkwa n'efu. Dịka azụmaahịa ọhụrụ, anyị ghọtara na ịbanye n'ụkwụ gị adịghị nfe. Iwulite mmekọrịta, ịlụ ọgụ na nkịta buru ibu ma kwụọ ụgwọ ihe niile ịchọrọ nwere ike isi ike. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe na - esote gị agaghị ekwe omume ịkwụ ụgwọ maka mkpọsa ụgwọ akwụ ụgwọ na ngwa ọchụchọ.
Ọ bụ ezie na ọrụ ndị a na-akwụ ụgwọ na-enweta ịpị ozugbo, gịnị ga-eme mgbe ị gwụla n'igo iji kpata ego? You nwere ike ikwe nkwa na saịtị gị ga-ejigide ọkwa ahụ? Nke a bụ ya mere okporo ụzọ SEO na-ebugharị kachasị mma kachasị mma. Site na okporo ụzọ organic, ị maara na websaịtị gị abụghị ọkwa maka na ị na-akwụ ụgwọ ya, mana ị ma na E-commerce SEO gị na-arụ ọrụ na ọnọdụ izizi.
Agbanyeghị, ọtụtụ mgbe, ndị ahịa azụmahịa e-commerce enweghị ike iji uru SEO. Ha ejighi n'aka otu esi ewute peeji nke ọdịda, gbasara anyị ibe ma ọ bụ ibe azụmahịa / mmepụta. Ihe a mere maka ibibi ọtụtụ azụmaahịa ndị nwere nnukwu ikike. Enweghị ihe ọmụma na nkà ịbịaru okporo ụzọ, ebe nrụọrụ weebụ gị na-anọgide na-anakọta mkpo cyber.
Ruo mgbe ị ga - enweta SEO gị nke ọma, ịbawanye ego maka mgbasa ozi agaghị eme gị ezigbo mma. Enweghị ụzọ ị ga-esi gaa na saịtị na-enweghị ọdịnaya na-atọ ụtọ ma nọrọ. Ma enwere ụzọ mgbapụ. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-akụ mgbidi mgbe ị na-achọ ịdọta okporo ụzọ gaa na saịtị gị, ịchọrọ aka ọkachamara. N’adịghịkwa ka ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ, anyị nwere ego, nwee ahụmịhe ma tinye gị ụzọ.
Iji nye gi nke kachasi nma, ndi otu anyi nwere ndi okacha amara, ndi nyocha, ndi edemede, na ndi okacha amara nke n’eme ka egboro gi mkpa gi niile. N'ụzọ nke a, ọnweghị onye ga-eti gị ihe n'elu.
Ihe omuma E-commerce SEO bara uru i nwere ike iji nweta oke
Tupu anyị ebido ịkọ ụfọdụ ndụmọdụ, anyị azụlitela ndụmọdụ ndị a dabere na nyocha sara mbara banyere otu anyị siri nweta ebe nrụọrụ weebụ anyị dị ugbu a iji lelee, echiche nke ahịa, usoro dị ugbu a na omume kachasị mma. Tupu ịnwale nke ọ bụla n'ime ndụmọdụ ndị a n'onwe gị, anyị chọrọ ịkọwa na weebụsaịtị ọ bụla bụ iche na nke pụrụ iche. Nke a pụtara na enweghị nkwa na nke a ga-abara gị uru. Iji nweta ihe kachasị mma, ịchọrọ nke kacha mma. Mee ka ndi okacha mara ihe gafee saịtị gị ma nye ya mmetụ aka ahụ.
N’onwe gị, mgbanwe ọ bụla ị na-eme na weebụsaịtị gị kwesịrị iji oke nlezianya mee ya.
Mee ka igwe nchọta ọchụchọ gụọ nyocha na saịtị gị
Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji dọta ndị ahịa ọhụrụ bụ site n'ime ka ihe ndị okenye kwuru gosi ha. Nke a na - eme ka anya gị dịkwuo elu site na ozi pụrụ iche na ibe nkọwa gị. Ọ dịghị onye chọrọ ịzụta n'aka onye na-ere ere na-enweghị nyocha. Ebe imerime ndị ntanetị dị, ị ga-ewulite ntụkwasị obi tupu ndị na-azụ ahịa nwere ike hazie ọrụ gị. Nnyocha e mere egosiwo na ihe karịrị 90% nke ndị ọrụ ịntanetị tụkwasịrị obi ndị na-azụ ihe. Site na igosipụta nyocha gị na ngwa nchọta, ndị zụrụ ahịa na-enwe obi ike banyere saịtị gị na ngwaahịa nke. Mgbe ahụ, ha agaghị enwe nsogbu ọ bụla ịga na ebe nrụọrụ weebụ gị iji lelee gị.
Lightmapụta nyocha ndị a dịkwa oke mma maka mbọ SEO e-commerce. Nyocha ọdịnaya bara ụba na-ekwu banyere ọrụ gị yana isiokwu SEO ndị ọzọ ka na-egosi na saịtị gị. Google na-ahụta ihe ndị a, ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ohere dị mma nke ịbanye n'ọkwá kachasị elu.
Otu uru dị ukwuu nke ndị na-azụ ahịa nyocha bụ na ha na-enye ndị na-azụ ihe anya. Nke a zuru oke n'ihi na ha na-ekwu maka uru ị na-enye site n'echiche pụrụ iche.
Mepụta Meta nkọwapụta
Nkọwapụta Meta gị bụ ejiji gị maka nzukọ ọ bụla. Otu o siri pụta ga-ekpebi etu ndị otu bọọdụ gị si akpọrọ gị. Uwe mara mma nke nwere agịga agbagọ agaghị enweta gị nkwekọrịta ahụ. Mgbe ngwa ọrụ ọchụchọ na-egosipụta nsonaazụ na ntanetị, ha na-agbakwunye ntakịrị ide n'okpuru isiokwu ma ọ bụ webụsaịtị na-akọwa ihe ị ga - achọpụta ma ọ bụrụ na ịpinye njikọ ahụ. Nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ metadata. Metadata dị oke mkpa iji mee ka ndị ọrụ kwenye iji pịa njikọ gị ọ bụghị ndị ọzọ.
Ide ederede meta, na-enweghị isi okwu abaghị uru ọ bụla. Ọ dị ka ilele mkpọsa ozi na-ekwughị banyere ngwaahịa ha na-akpọsa. Dika azụmahịa e-commerce nke na agbanwe agbanwe ahia ya mgbe nile, nkọwa nke meta gha agbanwe agbanwe mgbe nile ma icho uzo isi mee ya ka osiso buru ihe isi ike. Dị ka obere ụlọ ọrụ a igbapu na ohere ị na-enweghị na nke ukwuu, ọ bụ ya mere ọtụtụ azụmaahịa ji ahọrọ ndị ọkachamara SEO dị ka Semalt iji nyere ha aka.
N'ikpeazụ, gbaa mbọ hụ na nkọwa metadata gị dị iche. Ndị na-agụ akwụkwọ gị chọrọ ikwere na ị dị iche na nke pụrụ iche tupu ha agaa na saịtị gị.
Debe nkọwa ngwaahịa gị iche
Ihe di iche aburula ihe di nkpa kemgbe Google weputara algorithm ya. Algorithm a lekwasịrị anya n'ịkwalite ọdịnaya dị elu na mbụ. Ebumnuche nke mmepe a bụ ịta ahụhụ weebụsaịtị nke na-ede ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị ọzọ.
Otu ụzọ kachasị mma iji bulie weebụsaịtị gị bụ site na ọdịnaya pụrụ iche na SEO kachasị mma. Nke a na-etinye gị n'ọnọdụ kacha mma ka ịhụ gị na ndị ọbịa gị na-enwe mmetụta pụrụ iche nke na-eme ka ịzụọ ihe na ntinye aka.
Maka ndị nwe weebụsaịtị ndị dị adị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya inyocha saịtị gị maka ọdịnaya ọ bụla nwere ike ịdegharị. Ọ bụrụ n’ịhụ nke ọ bụla, degharị ya. Nke a na - enye gị ohere karịa asọmpi gị.
Jiri akara usoro akara
Usoro nhazi oge a bu otu ihe eji eme ihe di nkpa mgbe ichoro SEO na SEO. Ọ dị nwute, ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị eji eme ihe nke E-commerce SEO. Obere ihe mgbawa a na –emezi nsonaazụ gị site na itinye ọkwa nke kpakpando na akara ngosi ọnụahịa na Google. You chọpụtala na ị masịrị ịzụ ahịa site na weebụsaịtị ebe ị hụrụ ngwaahịa na ọnụahịa ya ebe ahụ na peeji nsonaazụ Google? Nke ahụ bụ ngwa ọrụ anyị na-eji maka weebụsaịtị gị.
Ọ bụ ezie na nke a abụghị ọnọdụ dị elu, ozi a na-atọ ụtọ n'ịhụ na-enye mgbakwunye ndị ọzọ maka onye ọrụ ọ bụla iji pịa njikọ gị.
Site na mmetụaka ọkachamara anyị na njirimara ndị a niile na-adọrọ mmasị, ọ dịghị ihe kpatara ịgaghị achọ ka anyị nweta ebe nrụọrụ weebụ gị n'ogo nke ogo Google. Ọtụtụ oge, anyị na-anwa ike anyị iji belata ụgwọ mana olee ihe ọ ga-efu? Site n'enyemaka na-enweghị ọrụ, ị naghị enye weebụsaịtị gị aka kacha mma. O nweghi onye nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ niile, maka na anyị chọkwara inyere ndị ahịa aka ka etolite, ọrụ anyị anaghị akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwekwara ike ịkpọtụrụ ndị na - ahụ maka ndị ahịa anyị ebe a . Ha dị njikere mgbe niile igboro gị mkpa gị. Ha nwere omume enyi, ha ga-achọ ịnụ ihe gị n'ọnụ a. Ha ga-aza ajụjụ gị niile gbasara ọrụ anyị ma ọ bụ ajụjụ metụtara SEO. Anyị na-atụ anya ịnụ olu gị.